Sina VIEW CS2 orinasa sy mpanamboatra | Foton
Ny traikefa tsara momba ny tanana sy ny fitondrana fiara dia mitondra anao any amin'ny ho avy manana fahitana
Karazan-tsolika Diesel / lasantsy
Karazana mitondra fiara 4 * 2
émission Euro IV / V
Base Base 2570/3110
maotera -4B1-70 KW / F2.8-96 / 110 KW
Lovaina amin'ny lova sy natokana ho an'ny fanavaozana, ny VIEW S dia maneho ny hakantony amin'ny antsipiriany famoronana rehetra. Ny fikatsahana fahalavorariana amin'ny habakabaka, ny fahombiazana, ny fiarovana ary ny asa-tanana dia tsy mifarana.
ISF2.8-Herin'ny herinaratra matanjaka avy any Cummins; 96KW-Hery matanjaka; Mahery vaika-Iray amin'ireo motera diesel mahery vaika isaky ny litatra avo indrindra eran'izao tontolo izao; Ny motera dia manana valin'ny famoahana 280N.M izay 22,5% -60% avo kokoa noho ireo vokatra mitovy aminy; Ny famoahana torela farany indrindra amin'ny 1400 r / min; 8,3L-Fanjifana solika isaky ny 100 km.
In-line 4-silinder, 16-valve, SOHC, multiport EFI
Fandraisana an-tanana ny tsanganana fandanjana roa, tappet hydraulic, sandry rocker miaraka amin'ny fanjaitra fanjaitra, satroka fitondra miorina sy forging
Izy io dia misy herinaratra avo, fananganana matevina, hovitrovitra ambany, tabataba ambany, fanjifana solika ambany, famoahana ambany, sns.
Mechatronic (fanaraha-maso ny fampitana fampidirana)
ASIS - paikady fanovana adaptive
Famaritana matanjaka amin'ny lanjany avo lenta (mifototra amin'ny toetran'ny fitaovana Lepelletier napetraka)
Kitapo rivotra roa an'ny mpamily / eo anoloana
Ny palitaon'ny fiarovana dia mampitombo ny fiarovana amin'ny toe-javatra maika
Ny varavarankely fandosirana overhead dia miantoka ny fiarovana anao
Famonoana afo mahazatra
Royal Saloon Royal Saloon no dikan-teny ho an'ny fianakaviana sy ny orinasa. Miaraka amin'ny trano mihaja, toerana malalaka ary fampiharana azo antoka ho an'ny fampiononana sy fiarovana, afaka mikarakara ny olona mihoatra ny lehibe izy io.
Ny kinova mpanohana dia manome fahafaham-po ny filan'ny mpandeha mamindra. Miaraka amina seza maromaro, misy ny fahaizan'ny mpandeha 14-17.
Ny kinova Transor Transor dia novolavolaina ho an'ny famindrana entana. Ny fahaiza-manao entana ambony indrindra dia mety hahatratra 2000 litatra.